လက်လီအိုင်ဖုန်း 12 စီးရီး 2.5D သီးသန့်တည်ရှိသည့်ဖန်သားမျက်နှာပြင်ကာကွယ်မှုထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | OTAO
လူတိုင်းဒီအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပါတယ်။ ငွေပေးချေရန်ကျွန်ုပ်တို့မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအသုံးပြုသောအခါအခြားသူများကသင်၏စကားဝှက်ကိုမြင်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်သင်၏ငွေကိုခိုးယူရန်သင်၏ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြောက်သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း၊ မြေအောက်ရထား၊ သို့မဟုတ်ဓာတ်လှေကားတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများဖွင့်ခြင်းသည်ဖမ်းမိခြင်းကိုမကြောက်ရွံ့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကိုင်ဖုန်း၏အကြောင်းအရာကိုအခြားသူများမြင်ရန်မတားဆီးနိုင်စေရန် OTAO သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် privacy-tempered glass screen protector ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို anti-spy သို့မဟုတ် anti-peep tempered glass screen protector ဟုလည်းခေါ်သည်။
သီးသန့်တည်ရှိမှုရုပ်ရှင်သည်သာမာန်ရုပ်ရှင်၌အသုံးပြုခြင်းဖြင့်သီးသန့်တည်ရှိမှု filter ကိုထည့်သည် Micro-louver optical နည်းပညာသည်အလင်း၏ထောင့်ကိုထိန်းချုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမျက်နှာပြင်၏မြင်ကွင်းထောင့်ကျဉ်းသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အခြားသူများသည်သင်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရန်သင်ကဲ့သို့ရှေ့တန်းထောင့်တွင်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီးမြင်နိုင်သောအကွာအဝေးပြင်ပရှိသူများသည်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ကိုသာတွေ့နိုင်သည်။
ဈေးကွက်တွင်အသုံးပြုသောသီးသန့်လုံခြုံရေးရုပ်ရှင်အတုလည်းရှိသည် polarized ပစ္စည်း အစား Micro-louver ၏ အမြင်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်း. Sဒါက သင်လုပ်နိုင်သည်’မျက်နှာပြင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည် ရှေ့ကနေ ဘေးထွက်,အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကောင်းကင်တမန်များထံမှအလင်းအများစုကိုပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
OTAO ပုဂ္ဂလိကဖန်သားပြင် ADVANTAG
ယခုစျေးကွက်တွင်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော anti-peep tempered film များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အရည်အသွေးမြင့်သောကာတွန်းရုပ်ရှင်ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
မင်း t ကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်တယ်wo ရှုထောင့်များ
● သီးသန့်တည်ရှိမှု ထောင့်；
anti-peeping effect သည်ကြည့်ရှုထောင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ကြည့်ရှုထောင့်လေလေ၊ Peeping anti-effect ကပိုကောင်းတယ်။ anti-peep ရုပ်ရှင်အဟောင်း၏တစ်ဖက်သတ်ကြည့်ရှုထောင့်သည် ၃၀ ဒီဂရီမှ ၄၅ ဒီဂရီခန့်ရှိပြီး၊ anti-peep အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာအတော်အတန်ညံ့ဖျင်းသည်။ OTAO iPhone anti-peep ရုပ်ရှင်သည်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ရှုထောင့် ၂၈ ဒီဂရီရှိပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ပိုကောင်း.
ငါတို့ ဒီမှာရှင်းပြဖို့လိုတယ်။ စျေးကွက်တွင်သီးသန့်တည်ရှိမှုရုပ်ရှင်များအတွက်အမည်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အချို့ကို ၁၈၀ ဒီဂရီသီးသန့်တည်ရှိသည့်ရုပ်ရှင် (ဟုလည်းခေါ်သည်) ဟုခေါ်သည်2 လမ်း လက်ဝဲနှင့်ညာဘက်ရှိလူများအား၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများမှကြည့်ရှုခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သော privacy films (360 °) privacy ရုပ်ရှင် (လည်းခေါ်။ )4လမ်း privacy ကို ရုပ်ရှင်၊ ဆိုလိုတာကလူတွေဟာသူတို့ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်း privacy ကိုထောင့်လေးထောင့်၊ အထက်၊ အောက်၊ ဘယ်နဲ့ညာကနေကြည့်နိုင်တယ်။ ဒီတော့ ၁၈၀ ဒီဂရီနဲ့ ၃၆၀ ဒီဂရီ ၏အယူအဆကနေကွဲပြားခြားနား privacy ထောင့်။
အလင်းထုတ်လွှတ်မှုအနေဖြင့်၎င်းသည်မျက်နှာပြင်ကိုကြည့်ခြင်း၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပြီး၎င်းသည် ပို၍ အရေးကြီးသည်။
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်စက်ရုံများစွာသည်နိမ့်ကျသော anti-peeping ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုကြလိမ့်မည်။ anti-peeping ထောင့်သည်အလွန်ကြီးမားသည်သာမကအလင်းထုတ်လွှင့်မှုသည်လည်းအလွန်နိမ့်သည်။ ၄၀% မှ ၅၀% သာသာရှိလိမ့်မည်။ မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့မျက်နှာပြင်ကိုကြည့်။
OTAO privacy film သည်မျိုးဆက်သစ် OCA optical ကော်အလွှာကို အသုံးပြု၍ မျက်နှာပြင်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားစေရန်နှင့်အလင်းထုတ်လွှတ်မှု ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်တောက်ပမှုကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ပြီးသင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းကိုသုံးသောအခါသင့်ကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်သည်။
နောက်တစ်ခု: 360 အပြည့်အဝကိုယ်ခန္ဓာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Combo 12
iPhone 12 စီးရီး 2.5D မျက်နှာပြင်အပြည့်ဖုံးအုပ်ထားသောဖန်ခွက် ...
Samsung S21 2.5D အဖုံးဖုံးဖန်ထည် ...
Samsung S21 2.5D အပြည့်ကော်ကော်ဖန်ထည် ...